यसकारण फुट्यो पार्टी : रञ्जु दर्शना - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
यसकारण फुट्यो पार्टी : रञ्जु दर्शना
पुराना शक्तिलाई झापड हान्ने भनेर तपाईँहरुले वैकल्पिक शक्ति भनेर विवेकशील शाझा पार्टी जन्माउनुभयो, वैकल्पिक भनिएको शक्ति पनि अन्तरविरोधमा फस्यो नि होइन ?
रवीन्द्र मिश्र पनि वैकल्पिक शक्ति भनेर आउनुभएको छ तपाईँहरु पनि वैकल्पिक शक्ति नै भनेर हिँडिरहनुभएको छ, अनि फेरि पार्टी फुटाउनुभयो । वैकल्पिक शक्ति भनेको के हो भन्ने विषयमा नै प्रश्न उठ्यो नि होइन ?
यो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यो प्रश्नको जवाफ समयले बताउँछ । हामी दुवै दलले गर्ने अबका कार्यक्रमहरुले कुन शक्ति वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने प्रष्ट पार्नेछ